Nraranye nye Onyeisi Ndị Mmụọ Ozi Raphael na ekpere ịrịọ maka nchekwa ya | EKPERE NA OZI
Urara nye Onyeisi Ndị Mmụọ Ozi Raphael na ekpere ịrịọ maka nchekwa ya
O Saint Raphael, onye isi ala nke mbara igwe, otu n’ime mmụọ asaa ahụ ndị na-atụgharị uche n’ocheeze nke Onye Kachasị Elu, mụ (aha) n’ihu Mụọ Nsọ Kachasị Nsọ, nke Mary Immaculate, Nwanyị Nwanyị anyị na Nwanyị Nwanyị nke Ndị Achịkwa Elekere itoolu nke ndị mmụọ ozi, doro onwe m nsọ. n’ebe ị nọ, ka ị bụrụ otu n’ime ndị na-ejere gị ozi ụbọchị niile nke ndụ m.
Gi Onye-isi ndi mo-ozi, nara onyinye m ma nara m nke nchedo gi nile ndi maara site na ahụmịhe nke nkwado gị. Nduzi njem, duru m n’ njem njem nke ndu a. Onye nchebe nke ndị nọ n’ihe egwu, mee ka m si n ’nsogbu niile nwere ike ibibi ahụ m na mkpụrụ obi m. Mgbaba nke enweghi obi uto, nyere m aka na ogbenye nke ime mmuo na nke aru. Onye nkasi obi nke ndị nọ n’ahụhụ, wepu ihe mgbu na-eme ka obi m anwụrụ ike na mmụọ m na nhụjuanya.
Ọgwụ nke Chukwu, gwọọ adịghị ike nke mkpụrụ obi na ahụ, dobe m ịdị nsọ, ka m nwee ike ijekwusi Onyenwe anyị ike. Onye na-echebe ezinụlọ, tụgharịa hụ ndị m hụrụ n'anya anya nke ịdị mma ka ha wee na-eche gị ma hụ nchebe gị. Onye nchebe nke nkpuru-obi anwa anwa, me ka m'pughari na nkpuru nke onye-nkpuru-obi nke onye-nwe-ayi ma ghara ikwe ka m daba n'ọnu-ya.
Onye enyemaka nke mkpụrụ obi ebere, ị toụrị ọ inụ na nchedo gị dị mma, ezubere m inyere ụmụnna ndị ihe na-esiri ike aka site n'inye m ihe niile m nwere. Nabata onyinye m dị umeala, gị Onye-isi-Mụọ Nsọ, ma nye m amara nke uto, n’oge ndụ m niile na n’oge ọnwụ, mmetụta nke nchebe gị na enyemaka gị. Amen.
Nke gara aga Post Gara aga post:Nkwupụta na Saint Joseph na arịrịọ megide coronavirus
Next Post → Post ozo:Oziọma nke taa bụ 11 Nọvemba 2020 na okwu Pope Francis